Owesifazane Uthola Isidalwa Esidla Ulimi ku-Can of Tuna - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Owesifazane Uthola Isidalwa Esidla Ulimi ku-Can of Tuna
Owesifazane Uthola Isidalwa Esidla Ulimi ku-Can of Tuna
Kulokho okukhulunywe ngakho ezinkundleni zokuxhumana njenge-Tuna-Gate, owesifazane waseNottingham uthole okuthile okuxakile kutoti elithengwe esitolo le-tuna ekuqaleni kwaleli sonto, ebelibonakala liyinhloko enqunyiwe yesidalwa esithile. Manje, ukuhlaziywa sekungenile, futhi imiphumela iyethusa impela.
Kulabo abaphuthelwe yindaba, uZoe Butler oneminyaka engama-28 ubudala wethuka lapho evula ithini le-'chunks chunks, 'njengoba amehlo ayemgqolozele ngqo. Uchaze ukungezwa okumangazayo kwesidlo njengomsila ocwebezelayo ngezansi, futhi kubukeka njengesaka elincane 'lesisu.'
Ngemuva kokuthinta inkampani ye-tuna ngesithombe sokutholwa kwayo okuvukelayo, inkampani yaqinisekisa lo wesifazane ukuthi lokho akuthola ngaphakathi kukanini kwakuyinkalankala encane, yize ochwepheshe be-Natural History Museum bengaqiniseki ukuthi ayinabungozi njengalokho.
"Ngokwalokho engikubonayo bengizokweseka ikhanda lentwala edla ulimi, iCymothoa exigua, noma okufanayo, ”Kusho uStuart Hine, umphathi we-Identification and Advisory Service kulo mnyuziyamu. "Ngicabanga ukuthi laba bangabahlanganyeli bezinhlanzi ezincane kune-tuna nezinhlanzi ezidliwa yi-tuna. Akungabazeki ukuthi singasho okuningi uma kwethulwe ngesifanekiso. "
Iyini intwala edla ulimi, ubuza? Yebo, yisinambuzane esincane esihlala ngaphakathi kwenhlanzi, singena ngemiphunga yaso futhi sizinamathisele olimini lwaso. Njengokungathi lokho bekungekho okwenele ngokwanele, lesi silwanyana sidla ulimi lwenhlanzi, bese siba ulimi lwaso olusha.
"Angizimiselanga ukuthola isinxephezelo futhi angifuni ukunikezwa i-tuna impilo yonke!”Kusho lo wesifazane, okungenzeka ukuthi ngeke aphinde adle inhlanzi.
Qaphela ukuthi udlani, bangane. Qaphela kakhulu.
Okuthusayo Esimeni: Abadlali Abaphezulu Abahlanu Abesabekayo Abashubile
Ukubuyekezwa Kwama-movie: 'Ukumba Uphela Komongo' ka-Adam Green